ချစ်ခင်ရတဲ့ Fanလေးတွေက Valentine day အတွက်ကြို Surprise လုပ်သွားတာကို ခံလိုက် ရ တဲ့ ဟိန်းဝေယံ – XB Media Myanmar
ရုပ်ရှင်မင်းသားချောလေး ဟိန်းဝေယံကတော့ အနုပညာလောကမှာ နှစ်အတော်ကြာ ရပ် တည်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ၊ ကြော် ငြာ တွေ များစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဆက်တိုက်ရိုက် ကူးနေပြီး ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုလည်း တက်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းပီသတဲ့ မျက်နှာနဲ့ စမတ်ကျစွာဝတ်ဆင်တက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သူများနေ့မှာ မင်းသားချောလေး ဟိန်းဝေယံကို ” ချစ်ခင်ရတဲ့ Fanလေးတွေက Valentine day အတွက်ကြို Surprise လုပ်သွားတယ်. .ပျော် လည်းပျော်သလို ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာ.. “ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ အတူ သူရ ထားတဲ့ ပစ္စည်းအချို့ကို ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန်းဝေယံရဲ့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနော်……….။
ဟိန်းဝေယံက အခုလက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုသာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေပြီး သူအား လပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချိန်ပေးတာကြောင့် ပရိသတ် တွေ ကလည်း အချစ်ပိုနေမှာ အမှန်ပါပဲနော်။ အခုလည်း သူရဲ့ ပရိသတ်တွေက FValentine day အတွက်ကြို Surprise လုပ်သွားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်ကြီး ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေနော်…..။
Source; Heinn Wai Yan,CRD-Myanmarload,Reference&Credit:Myanmarload.com
႐ုပ္ရွင္မင္းသားေခ်ာေလး ဟိန္းေဝယံကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ရပ္ တည္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မွုမ်ားစြာရရွိထားတဲ့ သူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ ၊ ေၾကာ္ ျငာ ေတြ မ်ားစြာရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး အခုလက္ရွိမွာလည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ ဆက္တိုက္ရိုက္ ကူးေနၿပီး ပြဲအခမ္းအနားေတြကိုလည္း တက္ေရာက္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက်ာ္းပီသတဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ စမတ္က်စြာဝတ္ဆင္တက္တဲ့ ပုံရိပ္ေတြေၾကာင့္ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြရဲ့ ဝန္းရံျခင္းကို ခံရသူပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ က်ေရာက္တဲ့ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ မင္းသားေခ်ာေလး ဟိန္းေဝယံကို ” ခ်စ္ခင္ ရတဲ့ Fanေလးေတြက Valentine day အတြက္ႀကိဳ Surprise လုပ္သြားတယ္. .ေပ်ာ္ လ ည္းေ ပ်ာ္သလို ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္ဗ်ာ.. “ဆိုတဲ့ စာသားေလးနဲ႔ အတူ သူရ ထားတဲ့ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ဓါတ္ပုံေလးေတြရိုက္ၿပီး တင္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဟိန္းေဝယံရဲ့ ပရိသတ္ေ တြက ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာေနာ္……….။
ဟိန္းေဝယံက အခုလက္ရွိမွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုသာ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၿပီး သူအား လပ္တဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြကို ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို အခ်ိန္ေပးတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ ကလည္း အခ်စ္ပိုေနမွာ အမွန္ပါပဲေနာ္။ အခုလည္း သူရဲ့ ပရိသတ္ေတြက FValentine day အတြက္ႀကိဳ Surprise လုပ္သြားတဲ့ လက္ေဆာင္ေလးေတြကို ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီး ၾကည့္ရွုေစနိုင္ ရန္အတြက္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါရေစေနာ္…..။
ချစ်သူများနေ့မှာ အမေဖြစ်သူကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ လူပျိုကြီးခန့် စည်သူ